राजनीतिक छुवाछूतबीच वाम एकता - विचार - कान्तिपुर समाचार
राजनीतिक छुवाछूतबीच वाम एकता
वैशाख १२, २०७४ राजेन्द्र महर्जन
काठमाडौं — पार्टी एकताको लहर चलिरहेका बेला अनेक पर्वमा जपिने लोकप्रिय मन्त्र भएको छ, वाम एकता पनि । माक्र्स, लेनिन र माओको जयन्ती वा वार्षिकी वा पार्टी स्थापना दिवसमा वाम एकताको नारा घन्काउने गरिन्छ ।
अरू बेला असली–नक्कली कम्युनिस्टको बिल्ला भिराउँदै राजनीतिक छुवाछूत गर्ने नेताहरूको यस्तो नाराबाजी धर्मगुरुहरूका मन्त्रजपभन्दा के भिन्न छ ? नाराबाजी वा मन्त्रजपबाट पक्कै पनि वाम एकता हुने होइन, वाम एकताका लागि त उत्पीडित जनताका मुद्दामा कार्यगत एकता गर्दै संयुक्त मोर्चाबन्दी र पार्टी एकताको शिखर चढ्ने हो । उत्पीडन र विभेदका मुद्दामा आधारित सहकार्य र पहलकदमी बिना नै वामपन्थी दलहरूबीच एकता हुने भए वाम एकताको जरुरी नै हुने थिएन । यहाँ त सबैभन्दा फस्टाएको खेती नै राजनीतिक नाराबाजी हो, त्यो पनि वाम एकताको, वास्तविक क्रान्तिकारी कम्युनिस्टबीच एकीकरणको, राष्ट्रवादी–देशभक्त शक्तिहरू बीचको हातेमालोको । पाउलो फ्रेरेले भनेझैँ नाराबाजीले त जनताका मनमस्तिष्कलाई नेताहरूको उपनिवेशमात्रै बनाउँछ ।
लेनिनको १४७ औं जन्मदिवसको उपलक्ष्यमा पनि काठमाडौंमा तीनवटा माओवादी समूहका नेता मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य ‘किरण’ र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले वाम एकताको नारा उराले । २२ अप्रिलमा मनाइने लेनिनको जन्मदिवस पारेर २००६ सालमा स्थापना गरिएको नेकपाले आन्तरिक विभाजनको फलस्वरूप दुई दर्जनभन्दा बेसी कम्युनिस्ट पार्टी जन्माइसकेको छ । तिनको संख्या टाइफाइड रोगीको ज्वरोजस्तै थपघट हुने क्रम जारी रहेको बेला तीन माओवादी सुप्रिमोका मुखबाट ‘वास्तविक कम्युनिस्टबीच एकता’को नारा जपिएको हो । त्यसो भए अब वास्तविक क्रान्तिकारी कम्युनिस्टबीच एकताको नारा साकार हुने स्थिति बनाइन्छ त ? गन्नै नसक्ने नेकपाको संख्या अब गणना र सम्झना गर्न सक्नेमा झर्न सक्छ त ? प्रश्नको घेरामा छन्, साना माओवादी समूहको दाबी र तिनका नेताहरूको बोली ।
यस्ता दिवसमा लगाइने वाम एकताको नाराबारे ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता–शक्तिअनुकूल देखाउने व्यवहार र बोल्ने भाषामा भिन्नता हेर्नलायक छ । पुष्पकमल दाहाल र खड्गप्रसाद शर्मा ओलीजस्ता ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षलाई नेकपा स्थापना दिवसले खासै छोएन, वाम एकताको राग गाउन पनि जरुरी भएन । कांग्रेसदेखि राप्रपासँग समेत सत्ता–साझेदारी गरिरहेका प्रचण्डले यही मौकामा राजनीतिक उपलब्धिको फेहरिस्त भएको वक्तव्यमार्फत निर्वाचनमार्फत सिंहदरबारका अधिकार गाउँ–नगरसम्म पुर्‍याउन आग्रह गरे । पञ्चहरूलाई पनि माथ गर्नेगरी राष्ट्रवादी भएका प्रमुख प्रतिपक्षी नेता ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि नियमित उपचारको क्रममा बैंककबाट भर्खरै फर्केकाले एमालेले पनि नेकपा स्थापना दिवस मनाउनु जरुरी ठानेन होला । चुनावको चटारोमा यस्ता दिवसले प्राथमिकता नपाउनु सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको शक्तिकेन्द्री नजरबाट हेर्दा सहजै बुझ्न सकिन्छ । यस्ता दिवस मनाउँदै वाम एकताको नारा लगाउने काम दल सानो हुँदा वा सडकमा हुँदामात्रै मज्जा आउँछ ।
अहिले वाम एकताको नारा जप्ने साना माओवादी समूह र तिनका एकसेएक नेतामा रहेको कम्युनिस्ट एकताप्रतिको मायामोह र प्रतिबद्धता पनि कसैबाट छिपेको छैन । पहिले माओ विचारधाराको वैचारिक ध्वजा उचालेर हिँड्ने नेकपा चौम, त्यसको फुटपछि बनेको नेकपा मसाल, त्यसको विभाजपछि निर्माण भएको नेकपा मशालसँग सम्बद्ध थिए, उनीहरू । एक समय एउटै पार्टीमा आबद्ध रहेका ती नेताहरूसँग अहिले आ–आफ्नै पार्टी छन्, सिंहको नेकपा मसाल, किरणको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी र विप्लवको नेकपा । ती राजनीतिक पसलबीच अनेक लोकप्रिय नारा बेच्ने मामिलामा प्रतिस्पर्धा रहेसम्म, आफ्नो एकल नेतृत्व स्थापित गर्ने महत्त्वाकांक्षाबाट प्रेरित क्रियाशीलता कायम राखेसम्म सिद्धान्त, विचार र राजनीतिको स्तरमा सहकार्य र एकता होला, उत्तर खोज्न सहज छैन ।
अशुद्ध र अछूत कम्युनिस्ट !
माओ विचारधाराको वैचारिक छाता ओढ्ने सिंह तथा माओवादी रेनकोट लाउने किरण र विप्लवबीच एकले अर्काेलाई हेर्ने दृष्टिमात्रै होइन, अरूलाई हेर्ने नजरमा पनि आकाश–जमिनको अन्तर छ । सिंहको दृष्टिमा किरण र विप्लव उग्रवामपन्थी थिए भने किरण र विप्लवको नजरमा सिंह दक्षिणपन्थी जडसूत्रवादी । किरण र विप्लवले एकले अर्कालाई यस्तै आरोप लगाउँदै पार्टी फुटाएकै हुन् । उनीहरूले एकले अर्कालाई हेर्ने नजर फेरिसकेका हुन् र ? अत: एकताप्रेमी जनमानसको मन बहलाउनमात्रै वाम एकताको नारा लगाएका त होइनन् ? शंकै छ ।
राजनीतिमा शत्रुका शत्रुलाई मित्र ठान्ने प्रचलन बलियोसँग गढेर बसेको छ । यतिखेर सिंहदेखि विप्लवसम्मका नेताहरूका घोषित–अघोषित ‘शत्रु’ प्रचण्ड हुन्, जो माओवादी केन्द्रका अध्यक्षमात्रै होइनन्, प्रधानमन्त्री पनि हुन् । सबैका समान शत्रु भएकोले होला, प्रचण्डको अनुहारमा देखिने दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई परास्त गर्नुपर्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । त्यस्तै एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको मुहारमा अभिव्यक्त हुने ‘दक्षिणपन्थी संशोधनवाद’ नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रमुख समस्या भएकोमा मतो मिलेको पनि हुनसक्छ । त्यस्तै प्रचण्डको माओवादी केन्द्र र ओलीको एमालेमा सैद्धान्तिक भिन्नता नरहेकाले उनीहरूबीच एकता भए वास्तविक क्रान्तिकारीहरूलाई पार्टी एकता र ध्रुवीकरण गर्न फाइदा हुने विचार बनेको पनि हुनसक्छ । दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संशोधनवादको मिलनमा फाइदा देख्ने विश्लेषणमा कहाँ कति मात्रामा वामपन्थ निहित छ, कहाँ कति मात्रामा असली र विशुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने चिन्तन समाहित छ, खुट्याउन सहज छैन ।
प्रचण्ड या ओलीसँग एउटै थालमा खाएका वा सत्ताको डुंगामा चढ्दै सुखभोग गरेका दल र नेताहरूले देखेको दक्षिणपन्थमा कहिलेदेखि नयाँ सिङ–पुच्छर पलाए, छुट्याउन मुस्किल छ । नेपालका एकसेएक सिद्धान्तकारबाट वामपन्थको समेत वस्तुसम्मत परिभाषा नगरिएको बेला दक्षिणपन्थको सिङ–पुच्छर खोज्न कठिन हुनु अनौठो होइन । के–के तत्त्व हुँदा वामपन्थी हुने, के–के नगर्दा दक्षिणपन्थी ? कसरी काम गर्दा सही, शुद्ध, पवित्र, असली, खाँट्टी वा वास्तविक कम्युनिस्ट हुने अनि के–केमा चिप्लिँदा वा संशोधन गरिँदा नक्कली, अशुद्ध र अछूत कम्युनिस्ट हुने ? पुष्पलाल श्रेष्ठलाई समेत गद्दार घोषणा गर्ने सिद्धान्तकारहरूले नेपाली क्रान्तिको मौलिक खाका कोर्ने हो कि रूस, चीन वा अन्तैको क्रान्तिको कपी गर्ने हो ?
चाहे जसरी बोलिएको वा लेखिएको होस्, बोली वा शब्दको पनि राजनीतिशास्त्र हुन्छ । वामपन्थ, दक्षिणपन्थ, अवसरवाद, संशोधनवाद, कम्युनिस्ट वा वाम एकता राजनीतिक शब्द हुन् नै, अन्य शब्द वा बोलिएका बोली पनि अराजनीतिक होइनन् । उदाहरणका लागि ‘असली’ वा ‘वास्तविक’ शब्दको राजनीतिक असलियतलाई नै हेर्न सकिन्छ । कम्युनिस्ट इतिहासमा आफूलाई असली/वास्तविक क्रान्तिकारी ठान्नेहरूबाटै पार्टी विभाजन भएको यथार्थ छ, किनभने उनीहरूका नजरमा अरू नक्कली/अवास्तविक क्रान्तिकारी हुन् । अध्येता बद्री नारायणका अनुसार सामन्ती मूल्य–मान्यताबाट बोझिल रहेको ‘असली’ शब्द उच्चारण गर्नासाथ हाम्रो दिमागमा ‘अन्य’का रूपमा घृणित वर्णशंकरको छवि आउँछ, जसलाई तल्लो श्रेणीमा राखेर हेलाँहोचो गरिन्छ ।
आफूलाई मात्रै असली क्रान्तिकारी ठान्नेहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासबाट वैधता पाउन खोजिरहेकै हुन्छ । कसैले रूसको त चीनको, कहिले कोमिन्टर्नको त कहिले रिमको समर्थन खोज्दै आएका ती नेताहरूले वैधता प्रदान गर्नसक्ने इतिहासमाथि समेत एकाधिकार कायम गर्न खोज्नु अनौठो होइन । आफूलाई असली हकदार ठहर्‍याउन इतिहासबाट वैधता र इतिहासमाथि एकाधिकार खोज्ने क्रममै नक्कलीपनाको, त्यस्तै संशोधनवाद वा अवसरवादको ‘न्यारेटिभ’ (भाष्य) निर्माण गरिन्छ । वर्ण/जातका मानिसलाई जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि असली–नक्कली, पवित्र–अपवित्र मान्दै श्रेणीबद्ध शुद्धताको घनचक्करमा फँसाउने यस्तो न्यारेटिभले पुरातन पार्टी, सिद्धान्त र विचारमाथि सन्देश, प्रश्न र आलोचनात्मक मन्थनलाई निषेध गर्छ, अनि जनमुखी र आमूल परिवर्तनको पक्षधरताको सट्टा कम्युनिस्ट पुरोहितवादलाई मात्रै फैलाउँछ । यहाँ कहीँ कतै पनि संशोधनवाद वा अवसरवाद वा दक्षिणपन्थको वकालत गर्न खोजिएको होइन, बरु वाम एकताको नारा दिने कम्युनिस्ट सिद्धान्तकारहरूलाई नेपाली सन्दर्भमा सर्वप्रथम वामपन्थ र दक्षिणपन्थबारे खोज र बहसको डबलीमा निम्त्याउन खोजेको मात्रै हुँ ।
प्रकाशित : वैशाख १२, २०७४ ०७:५३
०७२ को महाभूकम्पमा परी दुवै खुट्टा गुमाएका सन्देश भन्छन्- 'म फुटबल खेल्न सक्दिनँ र ?'
वैशाख १२, २०७४ अखण्ड भण्डारी/लीला श्रेष्ठ
भक्तपुर — महाभूकम्प नआएको भए उनी कतै फुटबल खेलिरहेका हुन सक्थे । भूकम्पले त्यो मौका खोस्यो । खेलैलाई ‘करिअर’ बनाउने सपनामा आघात पुगे पनि उनको अठोट तुहेको छैन, ‘भविष्यमा फुटबल खेलाडी भएरै छाड्छु ।’
भूकम्पले करिब ९ हजारको जीवन लग्यो । करिब ९ लाख परिवारको बास लग्यो । कक्षा ८ मा पढ्ने सन्देश बस्नेतको भने दुवै खुट्टा लग्यो । ‘मेरो भाग्य नै त्यही हो, बाँच्न पाएँ,’ उनी सन्तोष मान्छन्, ‘उपहार पाएको यो जीवनलाई अझ सफल बनाउन मेहनत गर्नेछु ।’
सुरुमा त उनलाई खुट्टाबिना केही गर्न सकिँदैन जस्तो लागेर निराश बनाउँथ्यो । ‘त्यस्तो होइन रहेछ,’ घरको छतमा कृत्रिम खुट्टाले फुटबल हान्दै सोमबार उनले भने, ‘अब मनोबल बढेको छ, अपांगता हुँदैमा अवसर सकिँदो रहेनछ । मेरो हिम्मत हराएको होइन, बढेको छ ।’
२०७२ वैशाख १२ को मध्याहन उनी काभ्रे साँगास्थित प्रहरी विद्यालयभित्र साथीहरूसँग चेस खेलिरहेका थिए । अचानक पृथ्वी हल्लियो । स्कुल भवन पिङझैं मच्चिन थाल्यो । विद्यार्थीको हुल दौडिएर बाहिर चौरतिर हानियो । उनी पनि त्यतै लागे । ढोकाबाट बाहिर मात्र के निस्किएका थिए, छत घेर्न लगाएको इँटाको गारो उनीहरूकै बीचमा गल्र्याम्मै खस्यो । एक जनाको मृत्यु भयो । दसभन्दा बढी घाइते भए ।
इँटाले पुरेर दुवै खुट्टा कच्याककुचुक पारिएका सन्देशसहित सबै घाइतेलाई बनेपाको शिर मेमोरियल अस्पतालमा भर्ना गरियो । अस्पतालले भोलिपल्ट बिहानै उनका दुवै खुट्टाको शल्यक्रिया गर्‍यो । तीन दिनपछि जब दुवै खुट्टा चल्न छाडे, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रेफर गरिदियो ।
‘दायाँ खुट्टा काट्नै पर्ने डाक्टरले भने,’ उपचार व्यवस्थापनमा खटिएका उनका ठूलाबुवा भोजकुमार बस्नेतले भने, ‘त्यो काटेको केही दिनमा बायाँ पनि काट्नुपर्ने भयो । वैशाख २९ को भुइँचालो आउँदा सन्देशलाई अपरेसन थिएटरमा राखिएको थियो । भागाभाग भयो ।
त्यस दिन स्थगित गरेर दुई दिनपछि काटियो ।’
सोलुखुम्बुको सल्यान–१ मा २०५७ फागुन २१ मा जन्मिएका सन्देशलाई पहाडमै भए पनि खास दु:ख थिएन । हजुरबुवाको खेतीकिसानी राम्रै चलेको थियो । बुवा प्रहरी सेवामा भएकाले उनले सदरमुकामको निजी स्कुल हवाइट हिल्समा सुरुबाटै पढ्ने मौका पाए । त्यहाँबाट तीन कक्षा पास गरुन्जेल उनी भलिबलका राम्रै ‘जुनियर’ खेलाडी भइसकेका थिए ।
जब ४ कक्षा पढ्न उनी प्रहरी स्कुलमा भर्ना भए त्यो क्षमतालाई झन् तिखार्ने मौका पाए । ‘अरूलाई भलिबल सिकाउन पनि गुरुहरूले मलाई नै भन्नुहुन्थ्यो,’ उनले ती दिन सम्झे, ‘तर, ७ कक्षामा पुगेपछि मेरो रुचि फुटबलतिर बढी भयो । अनि, त्यतै मोडिएँ ।’ स्कुलमा विभिन्न रङ नामका टिम थिए । उनी ‘रेड कलर’ बाट खेल्थे । भूकम्पले उनलाई ओछ्यानमा पारेपछि १० महिना स्कुल जान सकेनन् । जब गए, पहिलाभन्दा पढाइको परिणाम सपारे । अनि, खेलतिर पनि विस्तारै रुचि देखाउन थाले ।
दुई महिनाअघि स्कुलले आयोजना गरेको भलिबल प्रतियोगितामा उनलाई साथीहरूले आग्रह गरे, ‘तिमी खेल्न सक्छौ, आऊ खेलौं ।’ उनलाई पनि हिम्मत आयो । उनको टिम प्रथम भयो । ‘अब फुटबलमा पनि यस्तै सफलता चुम्न चाहन्छु,’ उनले भने । जब हामीले फुटबलसहित फोटो खिच्ने कुरा गर्‍यौं, उनले कृत्रिम खुट्टामा ममतापूर्वक मोजा लगाए । सावधानीपूर्वक जुत्ता पहिरिए । अनि, फुटबल टिपेर हौसिँदै चढे फलामे भर्‍याङबाट छततिर । ‘उसको खुसी,’ दिदी सन्ध्याले भनिन्, ‘जेमा हुन्छ, त्यही गरोस् । खालि फुटबल हेर्छ, फुटबलकै कुरा गर्छ । कुनै सहयोग र मौका पाए अवश्य खेलाडी बन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’
‘प्रिय सन्देश, तिमी मेरो हिरो हौ । तिम्रो मुस्कान र अझ राम्रो बन्ने संघर्षले मलाई यो पुस्तक बनाउन प्रेरणा दियो । यो तिम्रो पुस्तक हो । तिम्रो साथी– हवाना ।’ महाभूकम्पपछि संसारले बोलेको साझा टिप्पणी थियो– ‘नेपाली एक मात्र यस्तो जाति हो, जो दु:खमा पनि हाँस्न सक्छ ।’ त्यही आशयमा स्पेनी फोटो पत्रकार ओमर हवानाले नेपालको भूकम्पको तस्बिर–पुस्तक निकाले, ‘इन्डुरेन्स (सहनशीलता) ।’ त्यसमा उनले सन्देशलाई मुख्य ‘हिरो’ भनेका छन् । दिदीको अँगालोमा मुस्कुराइरहेका सन्देशको तस्बिरको बायाँ पानामा उनले मार्मिक वाक्यहरू लेखेका छन्, ‘नेपाललाई हामी केका नामले चिन्छौं ? सगरमाथा ? पक्कै, यो ध्रुव सत्य हो । तर, यो देशको सुन्दरता यसका हिमाल र भूबनोटले मात्र चम्किएको छैन, यहाँका जनताले पनि ।’
त्यसको उदाहरणका रूपमा उनले सन्देशको ‘मुस्कान’ लाई प्रस्तुत गरेका छन् । र, नेपालको विपत्तिप्रतिको असावधानी र जीवनमाथि हुने हेलचेक्य्राइँलाई लिएर दु:ख पनि व्यक्त गरेका छन् । भनेका छन्, ‘सन्देश जसले आफ्ना दुवै खुट्टा गुमाए जुन आफैं पढ्ने भवनको पर्खाल खसेर मात्र होइन, स्कुल र अस्पतालको लापरबाहीको समष्टिगत परिणाम हो ।’
२०६२ चैत ८ गते बिहान ८ बजेतिर झापा, बिर्तामोडस्थित प्रहरीचौकीमा ठूलो ट्रक छिर्‍यो । माओवादी लडाकु भटाभट झरे र गोली हान्दै भित्र छिरे । प्रहरीलाई कठालामा समातेर बाहिर ल्याए । लस्करै उभ्याएर कञ्चटमा गोली हाने । ९ प्रहरीको निधन भयो । तीमध्ये एक थिए प्रहरी सहायक निरीक्षक खेमकुमार बस्नेत, सन्देशका बुवा । त्यसपछि ५ वर्षका भाइ सन्देश, ७ वर्षकी बहिनी सबिना र आमाको रेखदेख सन्ध्याको काँधमा आइलाग्यो । ‘बुवाको घटनाको घाउ नबस्दै भाइमाथि यस्तो घटना भयो,’ उनले भनिन्, ‘रुँदै, सम्हालिँदै यहाँसम्म आइपुगें ।’
साँच्चै ज्ञानी छन् सन्देश । उनी घाइते हुँदा बोकेर शौचालयदेखि सबैतिर उनै दिदीले लैजान्थिन् । भाइको पछिल्तिर अनुहार पारेर बरर्र आँसु झार्थिन् । सोलुखुम्बुमा एक्लै बस्ने आमा पशुपति यदाकदा आउँदा उनी भक्कानिएर रुन्थिन् । ‘आमाका अगाडि रुनुहुन्छ दिदी भन्दै ऊ मलाई चिमोट्थ्यो,’ सन्ध्या सम्झिन्छिन् ।
दुवै खुट्टा नहुँदैमा फुटबल खेलाडी बन्न असम्भव छ ? गलत † संसारले तीव्र प्रगति गरेको छ । अपांगता भएकाहरूकै लागि पारा–ओलम्पिक खेल आयोजना गरिन्छ । त्यसमा फुटबल पनि राखिन्छ । प्रसिद्ध क्लबहरूले तिनका दक्षता निखार्न प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउँछन् ।
तिनैमध्ये चेल्सी जसले त्यस किसिमको अपांगता भएकालाई समेत गतिला खेलाडी बनाउने गरेको छ । चेल्सी फाउन्डेसनको वेबसाइटमा छ, ‘हाम्रो अपांगता समावेशी कार्यक्रमअन्तर्गत सबै किसिमका अपांगता भएकाहरूलाई नियमित एवं संस्थागत फुटबल प्रतियोगितामा सामेल हुन सुरक्षित एवं मनोरञ्जनात्मक वातावरणमा प्रशिक्षण दिइनेछ ।’ संयोगवश सन्देश चेल्सीकै फ्यान हुन् । चेल्सीकै जर्सीमा सजिएका उनले बल परसम्म पुग्ने गरी हान्दै छुट्नुअघि सोधे, ‘के म अब फुटबल खेल्नै सक्दिनँ त ?’
सबैभन्दा ठूलो कुरा त सन्देश भूकम्पका ती घाइते हुन्, जो वजनदार धातुको खुट्टा घिसार्दै मैदानमा उत्रिन्छन् । अरू थाकेर लत्रक्क देखिँदा उनी ठिङ्ग उभिएर मुस्कुराउँछन् । उनी किन सक्दैनन् फुटबल खेल्न ?
प्रकाशित : वैशाख १२, २०७४ ०७:३८